थेरापी प्वाइन्टकी ब्राण्ड ऐम्बेष्टर बनिन् मरिष्का – Nepali Digital Newspaper
सहमतिमा आए सिभिल अस्पतालका कर्मचारी
हिमानीको जन्मोत्सव भब्य रूपमा मनाइने
पुराना राजनीतिकर्मी आचार्यको निधन
पहिरोले पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध
घुन्सा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको १४ वर्ष पूरा
थेरापी प्वाइन्टकी ब्राण्ड ऐम्बेष्टर बनिन् मरिष्का
घटना र विचार, न्युज डेस्क !7months ago March 11, 2020
■ राजन घिमिरे, सिड्नी (अष्ट्रेलिया)
नेपाली सिनेमाकी अभिनेत्री एवम् मोडल मरिष्का पोखरेल सिड्नीस्थित थेरापी प्वाइन्ट की ब्राण्ड ऐम्बेष्टर नियुक्त भएकी छिन् ।
विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन गत साता अष्ट्रेलिया आएकी मरिष्कालाई थेरापी प्वाइन्ट, ऐजुकेसन तथा माइग्रेसन कर्नर र नेसन वाइड स्टेट ऐजेन्ट रियल स्टेटका प्रमुख सुनिल उप्रेतीले ब्राण्ड ऐम्बेष्टर नियुक्त गरेका हुन् ।
सिड्नीको लिडकममा रहेको वाइट पार्कमा भब्यताका साथ मनाइएको सिड्नी होली मेलाको कार्यक्रमबीच मरिष्कालाई ब्राण्ड ऐम्बेष्टर घोषणा गरिएको थियो ।
होली मेलामा करिव दुई हजार भन्दा बढी नेपालीहरू सहभागी रहेका कार्यक्रमबीच मरिष्का थेरापी प्वाइन्टकी ब्राण्ड ऐम्बेष्टर घोषणा भएकी हुन् । थेरापी प्वाइन्टका सञ्चालक सुनिल उप्रेती यस विधामा सक्रिय अष्ट्रेलियाकै पहिलो नेपालीमा पर्दछन् ।
‘मरिष्काजीले थेरापीसम्बन्धी अध्ययन तथा ज्ञान पनि भएकोले उपयुक्त ब्यक्ति ठानेर उहाँलाई हामीले आग्रह गरेका थियौँ, उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो’ – उप्रेतीले जानकारी दिए ।
मरिष्का पछिल्लो समय सालको पात बोलको गीतको म्यूजिक भिडियोबाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री हुन् । उनी के म तिम्रो होइन र ? मिष्टर भर्जिन लगायतका चलचित्रकी नायिका पनि हुन् ।
‘आफूले पढेको र थोरबहुत ज्ञान भएको विषयमा आवद्ध हुन पाउनुलाई म अवसरकै रूपमा लिन्छु । मलाई ब्राण्ड ऐम्बेष्टरको रूपमा विश्वास गर्नुभयो । म उहाँहरुको विश्वासलाई सगौरव निभाउने छु’– सिड्नीमा भेटिएकी मरिष्काले भनिन् ।
अहिले सुनिलको थेरापी प्वाइन्ट सिड्नीको क्याम्बल टाउनमा छ भने चाँडै सिड्नीकै सेभेन हिल्सबाट पनि सञ्चालनमा आउने बताइएको छ ।
‘हामीबाट अहिले साइकोलोजी थेरापी, अकुपेसनल थेरापी र स्पीच थेरापीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी चाँडै योबाहेक फिजियोथेरापी पनि शुरू गर्दै छौँ’– सुनिलले जानकारी दिए ।
देश जोगाउने कि व्यवस्था ?
बुध, अशोज ७, २०७७
सहस्रधाराको पहिरोका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध